Wayang Wahyu: Fitoriana Ny Baiboly Amin’ny Fampiresahana Saribakoly Any Java, Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Febroary 2018 1:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, русский, Español, Nederlands, 日本語, 繁體中文, Português, English
Little Khannun kely milalao ny Wayang Wahyu amin'ny fotoanan'ny Paska. Sary avy amin'ny atrikasa Bhuana Alit Workshop, nahazoana alàlana.
Manana ny lanjany lehibe amin'ny fiarahamonina any amin'ny nosin'i Java, Indonezia ny Wayang Kulit na indraindray antsoina hoe Wayang Purwa ( saribakoly ampiresahana vita amin'ny hoditra nomena endrika ). Naseho nandritra ny hetsika nataon'ny mpanjaka, fampakaram-bady sy ireo hetsika manan-danja hafa ny Wayang. Matetika, ny angano miendrika tononkalo indiana toy ny Ramayana sy ny Mahabharata no tantarain'ny Wayang. Izany dia satria fanjakana teo ambany fahefan'ny Hindoa i Java talohan'ny nahatongavan'ny Bodisma, Silamo ary ny Kristianisma.
Tamin'ny taona 1960, Timotheus Wignjosoebroto, Frera tao amin'ny Fratrum Immaculatæ Conceptionis (FIC), firahalahiana katolika any Solo, Java afovoany, no nanan-kevitra ny hampiditra ny fitoriana ny baiboly ao anatin'ireo fampisehoan'ny Wayang. Teraka ny Wayang Wahyu. Fahitana zava-baovao no dikan'ny ‘wahyu’ amin'ny teny Javane.
Tato anatin'ny taona vitsisivitsy, dia tsy nalaza firy loatra intsony ny Wayang, naleon'ireo taranaka tanora kokoa nifidy ny instagram toy izay ireo angano miendrika tononkalo nahazatra nataon'ny mpifehy ny saribakoly (antsoin'ny ao an-toerana hoe Dalang ). Na izany aza, misy tanora mpampiresaka saribakoly iray nanolo-tena hitahiry ny fahaizamanaon'ny fitantarana ny Baiboly amin'ny alàlan'ny Wayang Wahyu.
Namorona ny atrikasa Bhuana Alit i Indra Suroinggeno, izay tahaka ny Dalang, ary nitarika ireo atrikasa teny anivon'ireo tanora Javane mba hitahirizana sy hampiroboroboana ny fampiasàna ny Wayang Wahyu.
Ao anatin'ity tafatafa niaraka tamin'ity mpanoratra ity, no nizaràn'ilay mpampiresaka saribakoly ny fomba fijeriny momba ny asany sy ny ho avin'ny kanton'ny Wayang Wahyu.
Indra Suroinggeno manoloana ny Wayang Wahyu-ny. Sary avy amin'ny atrikasa Bhuana Alit, nampiasaina rehefa nahazoana alàlana.
Global Voices (GV): Azafady, mba azonao lazalazaina amin'ny mpamaky antsika ve ny momba ny Wayang Wahyu ary inona no mampiavaka azy amin'ny karazana Wayang hafa ?
Indra Suroinggeno (Suroinggeno): Aty Indonezia, misy karazana Wayang maro, ny Wayang Kulit ( saribakoly nomena endrika vita amin'ny hoditra), Wayang Klithik (saribakoly manana endrika andaniny roa vita amin'ny hazo ), Wayang Beber ( endrika lalaovina amin'ny wayang voaloko tamin'ny horonana fandokoana), Wayang Golek ( saribakoly manana endrika telo vita amin'ny hazo). Vita amin'ny hoditra ny Wayang Wahyu, nalaina tamin'ny saribakoly nomena endrika vita amin'ny hoditra, fa ny sarin'i Jesoa sy ireo olo-masina no ampiasainay entina hitantaràna ny tantara ao amin'ny baiboly misolo ny toeran'ireo endrika saribakoly mahazatra vita amin'ny hoditra. Tsy tomombana tsara ny zava-maneno ampiasainay, fa ahitàna ny saron gamelan (zava-maneno vita amin'ny varahana mitovitovy amin'ny atranatrana ), ny kendang (amponga nentim-paharazana), ny gejog lesung ( karazana laona lehibe fampiasan'ny tantsaha mba hanesorana ampombo), ny gambang ( zava-maneno sahala amin'ny atranatrana fa vita amin'ny hazo )
GV: Azafady, mba itantarao sombiny kely momba ny tantaran'ny Wayang Wahyu izahay.
Suroinggeno: Tany amin'ny taona 1960 tany ho any no niseho voalohany ny Wayang Kulit Wahyu, hevitra avy amin'ny Frera Timotheus. Ny fampielezana ny Kristianisma no iraka voalohany nataony, noho ny fahafantarana fa manana ny lanjany lehibe amin'ny Javane ny Wayang. Navadiny ho sehatra hiresahana sy hampianarana ny momba ny fiainana ny Wayang, ilay fampisehoana tsotra. Nihena, niaraka tamin'ny fotoana, ny lazan'ny Wayang Wahyu, eny fa na dia ny katolika (Javane) maro aza dia tsy mahafantatra ny fisiany. Izany no antony nanombohanay ny atrikasa (Wayang Wahyu), te-hampiditra ny fanahin'ny famindrampon'i Jesoa amin'ny alàlan'ny Wayang izahay.
Javane maro no mampihatra ny Kejawan, fiarahan'ireo finoana nentim-paharazana sy ny fampiharana ny fampiarahana izany amin'ireo karazana foto-pinoana toy ny Silamo, ny Bodisma, ny Hindoisma, ny Kristianisma.
Nazavain'i Suroinggeno tamin'ny GV fa ny Wayang Wahyu dia ohatra iray amin'ny fampiarahana ny kolontsaina Javane sy ny Katolisisma.
Suroinggeno: Fransiscus Asisi Trias Indra Setiawan no anarako katolika, fa mampihatra ny Kejawen aho. Bodista shivaita ny raibeko. Aminay, tsy azo ihodivirana Andriamanitra, izay ambony lavitra noho ireo fahasamihafàna ara-pivavahana erantany. Izahay ( Javane) dia nisafidy ireo fomba fivavahana vaovao.
GV: Bhuana Alit no iantsoana ny atrikasanareo. Azonao hazavaina ve ny dikan'izany ?
Suroinggeno: Bhuana Alit Bhuana Agung. Yin sy Yang. Tontolo bitika, tontolo goavana. Amin'ny finoanay nentim-paharazana ‘bhuana alit’ dia Andriamanitra ao anatin'ny fanahintsika. Filôzofia izany. Bhuana Alit no nataoko anaran'ilay atrikasa satria ‘bhuana’ dia midika hoe ny tontolo, ‘alit’ midika hoe bitika na ankizy. Ny tontolon'ny ankizy no dikan'ny Bhuana Alit, satria ny zava-dehibe dia mifantoka amin'ny fanofanana ireo andianà Dalang manaraka izahay.
GV: Inona no fanamby atrehan'ny Bhuana Alit amin'izao ?
Suroinggeno: Tsy manana mpanofana maro be izahay. Niaraka niasa tamin'ny Sekolin'ny Kanto Indoneziana (ISI) izahay, ny alma mater-ko, izay manofana ny tanoranay. Ary koa, isantaona isantaona, tsy nalefan'ny ray aman-dreny hamonjy ny fiofanana Dalang ny zanany, mba hifantohany amin'ny any an-tsekoly. Aorian'izany rehetra izany, laharam-pahamehana ny fampianarana ara-dalàna / azo antoka.
Nolazain'i Suroinggeno tamin'ny GV fa mba hanatsaràny ny fahaiza-manaony amin'ny fampitenenana saribakoly dia hanatrika tsy ho ela ny Habiranda izy, sekolin'ny Dalang tranainy indrindra any Jogjakarta naorin'itompokolahy Sultan Hamengku Buwono VII-n'i Jogjakarta.
GV: Ahoana no fahitanao ny atrikasa ?
Suroinggeno: Manonofy foana aho hoe indray andro any dia mety hahenika ny vahoaka marobe ny Wayang Wahyu fa tsy hijanona amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiangonana fotsiny ihany.
Neken'ny UNESCO ho sanganasan'i Oral sy Lova Masina ho an'ny olombelona ny Wayang tamin'ny 2003. Nihena ny lazany, fa ny ezaka atao mba hanavotana azy, toy ny atrikasa karakarain'ny vondrona Suroinggeno dia manome fanantenana momba ny hoavin'io kanto io.